Dhoofinta Shixnadaha Indhoolayaasha Muuqaalka Weyn ee Shiinaha iyo Shirkadaha | ETEX
Indhooleyaasha Wareegga ah waa daaqadda ugu caansan ee soosaarka alaabada. Waxay la shaqaysaa shaandhaynta iftiinka iyo hagaajinta. Iyada oo ku saleysan noocyo kala duwan oo ah naqshadaha dharka, Vertical Blind ayaa ah xulashada ugu ballaaran oo fudeed u dhigma baahidaada.
Ballaadh: 89/100 / 127mm Vane
Nidaamka: Nidaamka silsiladda / Wand
Naqshadaynta Wejiga: Balaq, Jacquard, Blackout, FR ..
Aluminium: Caano, Barxad, Sare, Waddo Yar
Indhooladeenna toosan ayaa qol dhammaysanaya. Waxay ka caawiyaan joogteynta asturnaanta, habeynta heerkulka, iyo ka joojinta iftiinka iftiinka soo gala qolka. Xaqiiqdii, indhooleheena tooska ah ee mugdigu waxay kufiican yihiin qolalka jiifka halkaasoo qoraxda xagaaga ay kugu kicin karto goor hore, ama joojiso kuwa yaryar inay seexdaan habeenkii.
Indhooleyaasha tooska ah ayaa ah hab wanaagsan oo loo badbaadiyo booska loona abuuro khadad nadiif ah, xarumo casri ah qol kasta. Indhooladeenna taagan waxay ku yimaadaan codadyo kala duwan oo dabiici ah si ay si aan kala go ’lahayn ugu dhexgalaan qurxinta gudahaaga iyagoo waliba ku daraya daaqad qurux badan daaqaddaada. Indhooleyaasha indhoolayaasha toosan ayaa xilligan aad loo jecel yahay, sidoo kale indhoolayaasha indhoolayaasha ah ee toosan. Midabadaani dhexdhexaadka ah waxay si fiican ugu shaqeeyaan xaalad kasta iyo qaab kasta oo qurxinta.
Ku habboon noocyo badan oo daaqad ah, laga soo bilaabo daaqadaha caadiga ah illaa albaabka baranda iyo daaqadaha Faransiiska, indhooladeenna toosan ee toosan waxay ku yimaadaan cabbirro iyo dhibicyo kala duwan. Haddii ay tahay kaydkaaga, ama aad ka raadineyso indhooleyaal toos ah daaqadda barafka, hubi inaad hesho waxaad uga baahan tahay Dunelm. Waxaan sidoo kale ku keydinnaa xulashooyinka ballaaran ee indhoolayaasha qalab kala duwan. Dharkeenna indhoolayaasha toosan ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwa noogu caansan, laakiin caag, bir iyo alwaax indhooleyaal ah ayaa sidoo kale la heli karaa.
● Way fududahay in la dayactiro:
Waxaa laga abuuray polyester oo lagu heli karaa midabyo kala duwan - oo ay ku jiraan caddaan, kareem iyo cawlan indhaheena tooska ah way fududahay in la ilaaliyo. Si fudud u nadiifi ama nadiifi maro nadiif ah si aad ugu soo celiso indhoolayaasha daaqadaha tooska ah sida ugu fiican. Tani waxay ka dhigeysaa mid kufiican sida indhoolayaasha jikada, halkaas oo kala-baxa iyo daadinta si fudud looga tirtiri karo nadiif. Indhooleyaal alwaax ah oo alwaax ah ayaa sidoo kale xiran oo aad u adag iyo dayactir hoose.
First Badbaadada marka hore:
Guryaha qoysaska waxaa muhiim ah in la fahmo nabadgelyada indhoolaha, gaar ahaan meelaha ay carruurta yaryar adeegsadaan. Khabiiradayaga labiska ee daaqada ayaa kaala talin kara indhoolaha kugu haboon adiga, sidoo kale waxay sharixi karaan muhiimada qalabka badbaadada xargaha.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan si badbaado leh ugu rakibida indhoolaha tooska ah gurigaaga, aqri hagaha Badbaadada Indhoole. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan labbiska daaqadaha, fadlan ka eeg tilmaamahayaga talo-bixinta khubarada. Baadhitaanno noocyada indhoolayaasha toosan oo buuxa oo soo hel ku habboon gurigaaga.
Adeegsiga Indhooleyaasha Tooska ah:
Indhooleyaasha Tooska ah Si baaxad leh ayaa loogu adeegsadaa Kafee, Dugsi, Hoy, Meelaha Dadweynaha, Dukaamada, Guryaha, Isbitaallada iyo dhammaan meelaha kale ee la wadaago. Indhooleyaashu waxay indha indheeyaan labadaba waxay isticmaalaan gudaha ama bannaanka. Iyada oo ku saleysan doorashada aan dhammaadka lahayn ee waxyaalaha indha la 'iyo nidaamyada.
Hore: Indho-indheeyayaasha Venetian
Xiga: Readymade Zebra Blind